काठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र संगठन विस्तार अभियान’ – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
काठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र संगठन विस्तार अभियान’
देशको राजधानी हुनुको कारण काठमाडौं सबैको केन्द्र हुनु स्वभाविक नै हो । तसर्थ यो आर्थिक रूपमा पनि केन्द्र हो, सामाजिक, राजनैतिक रूपमा पनि केन्द्र हो । प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीहरूको पनि केन्द्र हो र क्रान्तिकारीहरूको पनि केन्द्र हो । सबैका निम्ति ः कुटनैतिक हिसाबले यो विभिन्न दाउ पेचको पनि केन्द्र हो, फौजी हिसाबले सामरिक कला, कौशलता र ताकतको पनि केन्द्र हो । मुलुकको क्रान्तिकारी आन्दोलनको मुख्य ‘पिल्लर’ पनि काठमाडौं नै हो । प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रको मुख्य ‘मियो’ पनि काठमाडौं नै हो । नेपाली मौलिकतामा आधारित सशस्त्र जनविद्रोहको कार्यदिशाको केन्द्र पनि काठमाडौं नै हो । त्यस्तै क्रान्तिकारी जनविद्रोहको बिरूद्ध गरिने प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रको मुख्य केन्द्र पनि काठमाडौं नै हो । यसर्थमा ः काठमाडौंको भूमिका र महत्व कम छैन ।
बिगतदेखि नै अन्य न्यायपूर्ण आन्दोलनहरूमा जस्तै देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि काठमाडौंको जिल्ला पार्टीले अग्रपंक्तिमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कुरा जगजाहेर नै छ । सोझै शब्दमा उल्लेख गर्नुपर्दा निर्धक्कसँग के कुरा ब्यक्त गर्न सकिन्छ भने विप्लवको विचलन र बादलको पलायन पश्चात आम जनताको बिचमा र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय जगतमा संगठन र संघर्षको क्षेत्रमा पार्टीको पहिचानलाई दह«ो ढंगले स्थापित गर्ने काममा काठमाडौंको पार्टीले राम्रै भूमिका खेल्यो । मलाई लाग्छ राजधानीको पार्टी हुनुको नाताले, भौगोलिक रूपमा सबैको केन्द्रमा रहेको पार्टी हुनुको नाताले त्यो आवश्यक, जायज र स्वभाविक थियो ।
काठमाडौं पार्टीले नेतृत्व गरेको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको बिगतलाई अलिकति मात्र फर्केर हेर्दा यहाँ थुप्रै कामहरू भएका देखिन्छन् । यस क्रममा कार्यक्रम सफलताको सवालमा काठमाडौं जिल्लाको विशेष भूमिका हुनेगरी पार्टी अन्तर्गत कै अन्य केहि जिल्लाहरू सहितका संयुक्त कार्यक्रमहरू पनि कैयौँ पटक भैरहेकाछन् । राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालहरूमा अन्य पार्टीसँगको संयुक्त कार्यक्रमहरूमा पनि काठमाडौं जिल्ला पार्टीको विशेष भूमिका रहदै आएको कुरा सर्वविदित नै छ । साथै काठमाडौंमा काठमाडौं जिल्ला पार्टीको एकल आयोजनामा राष्ट्रियताको सवाललाई लिएर पटक पटक राता मार्चपास, काला मार्चपासहरू सम्पन्न भएका छन् । भारतीय नक्कली नक्साको बारेमा आज भन्दा करिव दुई बर्ष अघि नै काठमाडौं जिल्ला पार्टीले सबै नगर र महानगर कार्यालय र केन्द्रिय नापी विभाग, महानगरीय प्रहरी परिसर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत जिल्लाका लगभग सबै सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूमा अनुगमन गर्ने र पुरानो नक्कली नक्सा विस्थापन गर्नका निम्ति सल्लाह दिने र प्रतिबद्धता लिने, सक्कली नक्सा हस्तान्तरण गर्ने काम गरेको थियो । नक्कली नक्सा प्रकरणवारे हाम्रा कुराहरू त्यतिबेला कैयौँलाई क्याहो क्याहो लागेको थियो तर अहिले जव भारतले आफ्नो जम्मु–कास्मीर राज्यको पुनरसिमाङ्कन गरेर नया नक्सा सार्वजनिक ग¥यो तव सबै छर्लंग भयो । ’दुध को दुध पानीको पानी’ प्रष्ट देखियो । नेपालको ईतिहासमा आजसम्म कुनैपनि राजनैतिक पार्टीले त्यो ढंगको सचेत, अग्रगामी र रचनात्मक पहलकदमी लिन सकेको सायद यो नै पहिलो चोटी थियो । त्यो अर्थमा काठमाडौं जिल्ला पार्टीले गौरवको अनुभूति गर्दछ ।
त्यस्तै आज भन्दा ठिक एक बर्ष पहिले ०७५ फाल्गुन २६ गतेका दिन काठमाडौं जिल्लाका सबै नगर, महानगर प्रमुखहरू र जिल्लाका सबै राजनैतिक दल प्रमुख एवं शैक्षिक संस्थान प्रमुखहरू र विख्यात सिमाविद् बुद्धि नारायण श्रेष्ठलाई एउटै टेवुलमा राखेर पार्टी महासचिव क. किरणको प्रमुख आतित्थ्यतामा ‘राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र नेपालको वास्तविक नक्सा प्रयोगको प्रश्न’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । त्यस कार्यक्रमले जिल्लाका सबै राजनैतिक दल र जनप्रतिनिधि एवं बुद्धिजिवीहरूमा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा एकताको व्यापक आधार निर्माण ग¥यो ।
काठमाडौंको कथा, व्यथा र अभियान
बिगत केहि बर्षदेखि हाम्रो पार्टीले केन्द्रिय समितिको निर्णय अनुसार पटक पटक विभिन्न अभियानहरू संचालन गर्दै आएकोछ । ती सबै अभियानहरूमा काठमाडौं जिल्ला पार्टीको भूमिका उल्लेखनीय र प्रसंशनीय मात्र होइन अनुकरणीय पनि रहेको कुरा कसैसँग छिपेको छैन । पछिल्लो पटक पार्टी केन्द्रिय समितिको निर्णयानुसार तय गरिएको ’राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र संगठन विस्तार अभियान’ मा पनि काठमाडौंले आफ्नो भूमिका राम्रैसँग निभाउने प्रयत्न गर्दैछ । गत मंसिर पछिल्लो हप्तामा सम्पन पार्टी केन्द्रिय समितिको बैठकको स्प्रिट अनुसार स्थायी समितिको गत पौष १६ गते सम्पन्न बैठकको परिपत्र अनुसार ‘राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र संगठन विस्तार अभियान’ संचालन करिव ६ महिना हुने ठेगान गरियो । त्यसमा तिन चरण तय गरियो । पौषदेखि माघ १४ सम्म पहिलो चरण अर्थात् तयारीको चरण, माघ १५ देखि चैत्र २४ सम्म दोस्रो चरण र बैशाख चौथो सातादेखि जेठको दोस्रो सातासम्म लिम्पियाधुरा जाऔँ तेस्रो चरण ।
स्वभाविक ढंगले काठमाडौं जिल्ला पार्टी पनि ‘राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र संगठन विस्तार अभियान’ मा जुट्ने निश्चित भयो । पौष १५ गते काठमाडौं जिल्ला पार्टीको पूर्ण बैठक सम्पन्न भयो । बैठकले अन्य कैयौँ महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै पौष मसान्तसम्म सबै ईलाका र विशेष कमिटीहरूको बैठक सम्पन्न गरिसक्ने, माघ १४ सम्म आर्थिक तयारी लगायत अभियान सम्बन्धि सबै तयारीहरू गरिसक्ने र माघ १५ मा काठमाडौं मै हुने अभियान उद्घाटन कार्यक्रममा ब्यापक जनसहभागिता सहित सहभागी हुँदै माघको १६ गते देखि अभियानको फिल्डमा खट्ने निर्णय ग¥यो । सोहि अनुसार पौष मसान्तसम्म सबै ईलाका र विशेष कमिटीहरूको बैठक सम्पन्न भए । माघ १४ सम्म अन्य सबै तयारीहरू पुरा हुनुको साथै आंशिकरूपमा आर्थिक तयारीको काम पनि पुरा भयो । माघ १५ मा देशको ४ ठाँउवाट एकसाथ उद्घाटन सम्पन्न भएको अभियान उद्घाटन कार्यक्रम मध्ये काठमाडौंमा भएको अभियान उद्घाटन कार्यक्रममा काठमाडौं पार्टीको सक्रिय सहभागिता रह्यो । यसरी अभियानको पहिलो चरण अर्थात तयारीको चरणलाई काठमाडौं जिल्ला पार्टीले कुशलतापुर्वक पार ग¥यो ।
माघ १६ गते पश्चात केहि दिन काठमाडौंको अभियानमा अपेक्षाकृत गति आएन । यसका विविध कारणहरू रहे । पहिलो कारण ः मेरो व्यक्तिगत समस्या । आमा बिरामी हुनुभएकोले १५ गते अभियान उद्घाटनको कार्यक्रम स्थलदेखि म हतारिएर घर पुगें, आमालाई अस्पताल पु¥याएँ । १६ गते राति आमाको निधन भयो । कहिलेकाहीँ व्यक्तिको व्यक्तिगत समस्याको कारणले पनि पार्टी र क्रान्तिको काममा डिस्टर्भ हुँदोरहेछ । अचानक मेरी आमाको निधनले म माथि आएको समस्याको कारण पार्टीको अभियानलाई थोरै डिस्टर्भ पुग्यो, सायद मैले सम्हालेको पार्टीको जिम्मेवारी ज्यादै महत्वपूर्ण हुनुको कारण त्यो भयो भन्ने मलाई लागिरहेको छ । आमाको निधनको ७ दिन पश्चात म पार्टी काममा फर्किए ।
दोस्रो कारण ः दलहरूको संयुक्त कार्यक्रम । माघ १५ पश्चात् नक्कली नक्सा र एमसीसी बारे लगातार संयुक्त कार्यक्रमहरू आईरहे । ती कार्यक्रमहरूमा हाम्रो पार्टीले नै जनपरिचालनमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने र त्यसमा पनि काठमाडौंले नै पार्टीको तर्फवाट विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएको हुँदा काठमाडौंको अभियानले निक्कै डिस्टर्भ झेल्नु प¥यो । पार्टीको अभियान र संयुक्त कार्यक्रम बीच तालमेल मिल्न नसक्दा दुबैतिर असर पर्ने देखिए पश्चात् लिडरसीपसँग बसेर समाधन खोज्ने प्रत्यत्न गरियो र संयुक्त कार्यक्रमलाई पनि अभियान कै एउटा अंगको रूपमा लिने एकरूप बुझाई गरियो ।
तेस्रो कारण ः भ्यालीको अभियानलाई एकरूपतामा लैजाने प्रयास । भ्यालीका जिल्लाहरूलाई समेटेर प्रदेशको लिडरसिपको कमाण्डमा एउटै टिम बनाएर अभियान संचालन गर्ने हाम्रो राम्रो चाहना भएअनुसार त्यो गर्नको निम्ति गरिएको असफल प्रयासले पनि काठमाडौंको अभियानले डिस्टर्भ झेल्नु प¥यो ।
माघ १५ देखि यी र यस्ता डिस्टर्भहरूसँग लुकामारी गर्दा गर्दै १०÷१२ दिन बितिसकेछ । झसङ्ग भएर सोच्दा त माघको अन्तिम हप्तामा हामी पुगेछौँ । यहि अवस्थामा हामीले आफुलाई महान जनयुद्ध दिवसको संघारमा भएको पायौँ । हामी महान जनयुद्ध दिवसको तयारीमा लाग्यौँ । सँगै हामीले अब अभियानमा होमिनु पर्दछ भन्ने निस्कर्ष पनि निकाल्यौँ । १ गते जनयुद्ध दिवस सम्पन्न गर्ने, २ गते जिल्लाको बैठक बस्ने र ५ गते देखि अभियानमा जाने निस्कर्ष जिल्लाको लिडरसीप टिमले निकाल्यो । उतातिर ३, ५ र ८ गते फेरि संयुक्त कार्यक्रमको घोषणा भयो । हाम्रो योजना फेरि पछाडी स¥यो । अन्ततः काठमाडौं जिल्ला पार्टीको अभियान विशेष पूर्ण बैठक फागुन ७ मा बस्यो । उक्त बैठकले अभियान दल निर्माण ग¥यो । साथै अभियान दलका सदस्यहरू मध्ये जिल्ला पार्टीको जिम्मेवारी अनुसार अभियान अवधिभरका निम्ति पूर्णकालिन र अल्पकालिन सदस्य पनि ठोस ग¥यो । बैठकले अभियानको निर्देशिका, अभियानको नियम र फागुन ११ देखि चैत्र २० सम्मको अभियान तालिका पारित ग¥यो । अतः उक्त बैठकले ८ गते संयुक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने, ९ र १० गते आराम गर्ने र ११ गते देखि अभियानको फिल्डमा जाने निर्णय ग¥यो । सोहि अनुसार काठमाडौं जिल्ला अभियानको फिल्डमा उत्रियो ।
पहिलो दिन ः जसले अभियानका सबै दिनहरूको भावको प्रतिनिधित्व गर्दछ
दोस्रो चरण अभियानको पहिलो दिन फागुन ११ गते बिहान १० बजे अभियान टिम कीर्तिपुर टी.यु. गेट अगाडी केन्द्रित भएर १०.३० बजे दक्षिणकाली नगरपालिकाको फर्पिङतिर हिँड्यो । १२ वटा मोटरसाईकलमा सवार अभियान दलका हामी २३ जना सदस्यहरूको टिम करिव ११.३० बजे फर्पिङ् पुग्यो । ३ जना कमरेडहरूले अभियानमा आवश्यक सामान बोकेको गाडी लिएर आउनुपर्ने र हामीले उहाँहरूलाई फर्पिङमा पर्खनु पर्ने भएको कारण हामी करिव १ घण्टा फर्पिङमा बस्यौँ । गाडी आए पश्चात हाम्रो टिम छैमुलेतिर कुद्यो । छैमुले पुगेर केहि समर्थक र अन्य स्थानीयवासीहरूसँग भेटघाट, छलफल गरियो । पर्चा वितरण गरियो, स्थानीयवासी र समर्थकहरूले फेरि अर्को पटक अलि समय लिएर आउने सल्लाह दिनुभयो । फेरि आउने वचन दिएर हामी उहाँहरूसँग बिदा भयौँ ।
त्यसपछि हाम्रो टिम छैमुलेको वडा कार्यलयमा गयो । वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधिहरूसँग राष्ट्रियताको विषय खासगरी भारतीय नक्कली नक्सा र एमसीसी परियोजनाको बारेमा अन्तरक्रिया गरियो । वडाका जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन रहने वचन दिनुभयो । हामीले युवालिगद्वारा निर्मित नेपालको सक्कली नक्सा वडा अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरियो । साथै हामीले वडा कार्यालयमा झुन्ड्याइएको भारत निर्मित नक्कली नक्सा हामीलाई दिन आग्रह गरियो । हाम्रो आग्रहलाई उहाँहरूले सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो र हामीलाई उक्त नक्सा दिनुभयो । उहाँहरूसँग बिदा भएर हामी फर्पिङतिर फर्कियौँ ।
फर्पिङमा नगर कार्यालय गयौँ । नगर कार्यालयभित्र नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै करिव दुई बर्ष अघि हामीले नै दिएको नेपालको वास्तविक नक्साले भित्तामा झुन्डिएर हामीलाई नै स्वागत गरिरहेको देख्यौँ र हामी आनन्दित भयौँ । त्यहाँ नगर प्रमुख लगाएत जनप्रतिनिधिहरूसँग परिचय र राष्ट्रियताको बारेमा अन्तरक्रिया गरियो । नगर प्रमुखले राष्ट्रियता सम्बन्धि हाम्रो अभियानलाई पूर्ण समर्थन रहेको घोषणा गर्नुभयो । उहाँले दक्षिणकाली नगरका १० वटै वडा र नगर कार्यालयलाई गरी ११ वटा सक्कली नक्सा माग गर्नुभयो र हामीले उहाँलाई ११ वटा सक्कली नक्सा हस्तान्तरण ग¥यौँ । नगर कार्यालयमा रहेको नक्कली नक्सा हटाउने बारेमा नगर प्रमुखसँग मैत्रीपूर्ण छलफल ग¥यौँ । नगर प्रमुखले १ हप्ताभित्र त्यो नक्सा हटाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेपश्चात् हामी उहाँहरू सँग बिदा भएर नगर कार्यालयबाट बहिरियौँ । त्यसपछि फर्पिङ चोकमा साँझ ५ बजे कोणसभा सुरू ग¥यौँ र ६ बजे समापन ग¥यौँ । कोणसभा समापनसँगै छैमुले वडा कार्यालयबाट लिएको भारत निर्मित नक्कली नक्सा जलायौँ । काठमाडौं अभियान दलको अभियानमा भएका सबै दैनिकी यहाँ राखेर लेख लामो बनाउनु मैले उपयुक्त ठानेन । अभियानका सबै कर्म र क्रियाशीलताको प्रतिनिधित्व यहि पहिलो दिनले नै गर्दछ । लगभग सबैदीन यसरि नै चलेकाछन् । थप जोडिएका एकाध रचनात्मक विषय वस्तुहरू प्रसँगबस उल्लेख गरिने छन् ।
अभियानमा आन्तरिक भेटघाट र छलफल
दक्षिणकाली नगरपालिका देखि सुरू गरिएको शुभचिन्तक, पार्टी समर्थकहरूसँगको भेटघाट, छलफल र अन्तरक्रियाहरू निरन्तर चलिरह्यो । यसक्रममा दक्षिणकाली नगरपालिकाको छैमुलेमा पार्टी समर्थकहरूसँग भेटघाट र छलफल गरियो । दक्षिणकाली नगरपालिकामा संगठन शुन्य रहेको वर्तमान अवस्थामा त्यो भेटघाट र छलफलले आगामी दिनमा संगठन निर्माणको आधार तयार गरेको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकामा पार्टी समर्थक र पार्टी सदस्यहरूसँग भेटघाट र छलफल भयो । त्यो भेटघाट र छलफलले कीर्तिपुरको पार्टीलाई गति दिने उर्जा प्राप्त भएको महशुस गरेका छौँ । चन्द्रागिरी नगरपालिकामा अत्यन्तै पुराना तर आ–आफ्नो व्यस्तताको कारण निस्क्रिय स्थितिमा रहेका पार्टी सदस्यहरूसँग भेटघाट र छलफल गरियो । प्रदेश सेक्रेटरी कमरेड प्रवेश समेतको उपस्थितिमा भएको उक्त भेटघाट र छलफलले चन्द्रागिरीको पार्टीलाई थप गतिशील बनाउन मद्दत पुगेकोछ । नागार्जुन नगरपालिकामा बिगतमा पार्टी कमिटीमा रहेर काम गरेका तर हाल पार्टी सम्पर्कमा नभएका कमरेडहरूको ठुलो टिमसँग भेटघाट र छलफल भयो । पार्टीमा कामगर्ने ईच्छा शक्ति बोकेर आएका ती कमरेडहरूसँगको भेटघाट र छलफलले अभियान टिमलाई पनि थप जोश र जाँगर प्राप्त भयो । पार्टीको कुनैपनि संगठन नभएको नागार्जुन नगरपालिकामा अब तुरून्तै देजमो र जबसहरू गठन हुनेभएका छन् र निकट भविस्यमा नै त्यहाँ पार्टी कमिटी पनि निर्माण हुने सम्भावना बढेकोछ । तारकेश्वर नगरपालिकामा बिगत लामो समयदेखि पार्टी काममा सक्रिय हुन नसकेका कमरेडहरूका घर घर मै गएर भेटघाट, छलफल गरियो । साथै त्यहाँको नेतृत्वसँग बसेर विशेष छलफल पनि गरियो । ती भेटघाट र छलफलले तारकेश्वरको पार्टी कमिटीलाई अघि बढ्न प्रेरणा दिएकोछ र स्थानीय नेतृत्वलाई थप जिम्मेवार बन्न प्रेरित गरेकोछ । टोखा नगरपालिकामा पुराना निष्क्रिय पार्टी सदस्यहरू र धुर्विकरणमा आएका तर सक्रिय भूमिकामा नरहेका कमरेडहरूसँग बसेर छलफल गरियो । छलफलबाट ती कमरेडहरू अब अगाडी पार्टी काममा सक्रिय हुने निस्कर्ष निकालियो । त्यो निस्कर्षले निश्चय नै टोखाको पार्टीले एउटा छलांग हान्नेछ ।
अभियानमा नक्सा अनुगमन र अन्तरक्रिया
फाल्गुन ११ देखि फागुन २३ गते सम्म ‘एक नगरपालिका दुई दिन अभियान’ को नीति अनुसार हामीले काठमाडौंका ६ वटा नगरपालिका, १७ वटा वडा कार्यालय र ८ वटा स्कुलमा भारतद्वारा निर्मित नक्कली नक्सा अनुगमन गर्ने, राष्ट्रियता विशेष अन्तरक्रिया गर्ने, नक्कली नक्सा विस्थापन गर्न उत्प्रेरित गर्ने र सक्कली नक्सा हस्तान्तरण गर्ने काम गरियो । यो क्रममा अभियान दलले ४५ वटा सक्कली नक्सा हस्तान्तरण ग¥यो । अन्तरक्रिया र छलफलको क्रममा नगर, वडाका जनप्रतिनिधि तथा विद्यालयका सबै प्रतिनिधिहरूले हाम्रो अभियान प्रति हार्दिक समर्थन व्यक्त गर्नुभयो । पार्टी र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको निम्ति यो शुभ संकेत हो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ ।
अभियानमा शहिद बेपत्ता परिवार भेटघाट तथा सम्मान
काठमाडौंको दोस्रो चरणको अभियान सुरू गरेको तेस्रो दिन अर्थात् फागुन १४ गतेदेखि शहिद सप्ताह प्रारम्भ भयो । अभियानको चटारोमा परेका हामीलाई शहिद सप्ताह समयको हिसावले ज्यादै छोटो भयो । त्यसकारण शहिद तथा बेपत्ता योद्धा परिवारसँग भेटघाट र सम्मान गर्नको निम्ति शहिद सप्ताहको एकहप्ते समय सिमाभित्र नबाढाइकन अभियान अवधिभर काठमाडौंमा रहेका सबै शहिद तथा बेपत्ता योद्धा परिवारसँग भेटघाट र सम्मान गर्ने हाम्रो योजना हो । अतः फागुन १४ देखि फागुन २३ सम्म हामीले ११ जना शहिद तथा वेपत्ता योद्धा परिवारसँग भेटघाट र सम्मान गरियो । यस अन्तर्गत क. रेनुका दुलालको परिवार – चन्द्रागीरी, क. मिना श्रेष्ठको परिवार – चन्द्रागिरी, क. हरिश्चन्द्र महर्जनको परिवार – चन्द्रागिरी, क.सुचिन्द्रको परिवार –चन्द्रागिरी, क.रामहरि फुयालको परिवार – चन्द्रागिरी, क.निश्चल नकर्मीको परिवार –चन्द्रागिरी, क.पिपल श्रेष्ठको परिवार – नागार्जुन, क.श्रीराम ढकालको परिवार – तारकेश्वर, क.बाबुकाजी ढुंगानाको परिवार – तारकेस्वर, र क. भिम महर्जनको परिवार – टोखा लाई भेटघाट र सम्मान गरियो । भेटघाटको क्रममा शहिद तथा वेपत्ता योद्धा परिवारजनबाट पार्टीलाई अत्यन्तै स्नेहका साथ थुप्रै सल्लाह, सुझावहरू प्राप्त भएका छन् । ती सल्लाह र सुझावहरू पार्टी र क्रान्तिका महत्वपूर्ण सम्पतिका रूपमा सधैँ रहिरहने छन् ।
अभियानमा कोणसभा र चोकसभा
दोस्रो चरणको अभियान सुरूदेखि स्थगनसम्मको छोटो अवधिमा काठमाडौंको अभियान दलले जम्मा १४ वटा कोण तथा चोकसभाहरू सम्पन्न ग¥यो । यी मध्ये धेरै चोकसभा र थोरै कोणसभा भएका छन् । जो निम्न स्थानहरूमा निम्न संख्यामा सम्पन्न भए ः नयाँ बसपार्क –१, पुरानो बसपार्क –१, दक्षिणकाली –१, कीर्तिपुर –२, चन्द्रागिरी –३, नागार्जुन –३, तारकेश्वर –१ र टोखा –२ । यी सभाहरूमा भारतीय विस्तारवादद्वारा गरिएको सिमा अतिक्रमण, लिम्पियाधुरा–लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र माथि भएको हस्तक्षेप, अमेरिकी साम्राज्यवादले लादेको एमसीसी परियोजनाको ब्यापक भण्डाफोरका साथै नेपालको कथित कम्युनिष्ट सरकारको दलाल चरित्रको चर्को बिरोध गरिएको थियो । टोखा नगरको पहिलो चोकसभालाई पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य तथा ३ न.प्रदेश ईन्चार्ज क. सागर र दोस्रो चोकसभालाई पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य तथा अनेम संघ (क्रान्तिकारी) का केन्द्रिय अध्यक्ष क. अम्बिका मुडभरीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । अन्य सभाहरूलाई काठमाडौं जिल्ला ईन्चार्ज क.सरू, जिल्ला सेक्रेटरी क. अमर, देजमो जिल्ला अध्यक्ष क. बन्धुदेव पाण्डे, पार्टीका नेता क.पदम भण्डारी, दलित मोर्चाका नेता क.राम नेपाली, अनेम संघ (क्रान्तिकारी) का नेत्री क.रिना गेलाल, क्रान्तिकारी युवा लिगका नेता क.शुरेश तामाङ, मजदुर नेताहरू क.ढोग प्रसाद अधिकारी, क.बद्रि चापागाई, क.कुमार घताने, क.दिनेश बर्तौला, किशान महासंघका नेता क. शेखर नाथ आचार्य आदिले नियमित र अनियमित सम्बोधन गर्नुभएको थियो । चोकसभा र कोणसभाको अवसरमा ब्यापक पर्चा वितरण गर्ने तथा गाडीहरूमा ३ वटा नक्सा अंकित सयौँ स्टिकर टाँस्ने काम पनि सँगसँगै भए ।
अभियान स्थगनको बक्तव्य र काठमाडौंको अभियान
पार्टीको दोस्रो चरणको अभियानलाई काठमाडौंले तीन उपचरणमा विभाजन गरेर अघि बढिरहेको अवस्था हो । पहिलो उपचरण ः नगर केन्द्रित अभियान जसमध्ये काठमाडौं जिल्लाका १० वटा नगरपालिकाहरूमा बिदा बाहेक २० दिन अभियान संचालन गर्ने । दोस्रो उपचरण ः महानगरमा बिदा बाहेक ८ दिन अभियान संचालन गर्ने र तेस्रो उपचरण ः जबस र मोर्चाहरूको जिल्ला भेला र समेलन बिदा बाहेक १५ दिन अभियान कै रूपमा सम्पन्न गर्ने । यसरी काठमाडौंको अभियान चैत्र २० सम्मको योजना लिएर आफ्नो सेटमा हिँडिरहेको स्थिति हो । यसै बीच कोरोना भाइरसको कारण काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भिडभाड नगर्ने, अनावश्यक हिँडडुल नगर्ने, सभा, सम्मेलन आयोजना नगर्ने विज्ञप्ति जारी भएकै अवस्थामा हामीले हाम्रो अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका थियौँ । यहि अवस्थामा महासचिव क. किरणले कोरोना भाइरसको संक्रमण बाट बच्न बचाउन सतर्कता र सजगताको निम्ति फागुन २३ गते अभियान १५ दिनको निम्ति स्थगित गरिएको बक्तब्य जारी गर्नुभएको कुरा हामीले फिल्ड मै जानाकारी पायौँ । अतः हामीले हाम्रो अभियान फागुन २४ देखि स्थगित ग¥यौँ । फागुनको २७ गते जिल्ला कमिटीको सचिवालयको बिस्तारित बैठक बस्यौँ र अभियानलाई फरक ढंगले अर्थात् आन्तरिक संगठनात्मक काममा जोड दिँदै अगाडी बढाउने निर्णय ग¥यौँ । त्यहि अनुसार अहिले काठमाडौं अघि बढिरहेको छ ।